China yakachipa-yemapuranga crates-for-sale fekitori nevagadziri |Huiyang
HYC194025-yakachipa-mapuranga emapuranga-ekutengesa muruvara rwebrown kana yekare ruvara ruchena.Customized size, logo, ruvara uye dhizaini inogamuchirwa.Isu tine MOQ yakafanana yedhizaini dhizaini uye sampuli yedu.
1. Rustic brown color Wood Nesting Crates ane Handles Decorative Wooden Storage Container Mabhokisi, Seti ye3. Nekushongedza kwekona yesimbi.Iri rinoyevedza crate remapuranga rakaiswa nemaitiro, basa uye dhizaini.Matatu rectangular nesting crates akanakira kushongedza, kuchengetedza uye kuronga.
2.Magadzirirwo akashungurudzika anokweretesa kupenya kwechinyakare kune aya evintage style crates.
3.Makareti aya ekugadzira matendere anotakurika uye anogara mukati memumwe kune mumwe kuitira kuchengetedza zviri nyore uye zvakare kuchengetedza nzvimbo nekutakura.Mibato yekucheka inoita kuti zvive nyore kutakura.
4. iyi yakawanda inoshanda huni crate midziyo.Aya mabhokisi ekuchengetera huni akanakira matoyi, mitambo kana zvigadzirwa zvekugadzira.Iwo akasiyana saizi anopa akawanda sarudzo dzekubata makushion, yekurara, matauro, zvimbuzi nezvimwe.
5. Iwo makrete akasimba, asi anoshongedza zvakanyanya.Inogona kushandiswa kumusoro kwekicheni makabati kune zvihwitsi uye kwete kudyiwa zuva nezuva nevana.
6. saizi yeLarge Crate: iri 35x25x15cm.Set of 3 wood nesting crates.Cheap-wooden crates-for-sale
Saizi yakasarudzika, logo, ruvara uye dhizaini inogamuchirwa.Isu tine MOQ yakafanana yedhizaini dhizaini uye sampuli yedu.
Nhoroondo yefekitari: Isu tiri FSC yakasimbiswa fekitori.18 makore FSC yakasimbiswa mugadziri, 16 makore Alibaba Golden Supplier
Kusarudzwa kwezvinhu: Paulownia wd, Pine wd, poplar wd, Beech huni, Plywood, MDF
Saizi Inogona kugadzirwa
OEM sevhisi: Ehe
Technic: Yakakwenenzverwa, Yakavezwa, laser engraving, Yakapendwa, yakadhayiwa ruvara, moto unopfuta
Sample Time: Anenge 5-7 mazuva ekushanda
Nguva Yekugadzira: Anenge mazuva 40-55
MOQ: USD1000.00 per item uye USD5000.00 per shipment.
Packaging Details: Yakajairwa kurongedza: chena bepa, EPE foam bepa, bubble bhegi, blister kurongedza, tsamba yekuraira bhokisi, yemukati bhokisi, ruvara rwekugadzira bhokisi, mashanu akaturikidzana emakatoni ane makora.Customized packaging inogamuchirwa.
Kubhadhara Mitemo: T/T, L/C, Paypal, Western Union, Alibaba Trade Assurance.
Mubvunzo: Chii chinobatsira kune vatengi venguva refu kana vanogovera?
A: Kune avo vatengi venguva dzose, tinopa incredible discount, sample free shipping, free sample for custom design, custom packaging uye QC sezvinodiwa netsika.
Mubvunzo: Ndinogona kuwana basa remusuo nesuo here?
A: Hongu, tinogona kupa basa repasuo nesuo.
Zvakapfuura: Wholesale Custom Wood Bhokisi Chipo
Zvinotevera: OEM China China Toy Chitoro Retail Display Rack
Diki Mabhokisi emapuranga
Wooden Crate Bhokisi